Waxaa jira meel dunida ka mid ah oo loo yaqaan "Dubai"
Dhamaanteen waan jecel nahay UAE
Waxaa jira meel Adduunyada waxaa loo yaqaan "Dubai". “DUBAI” meel aad ku nasato maskaxdaada murugsan. Waxay waddo u noqotay sheekooyinka guusha kuwa badan oo doonayey inay gaaraan oo gaaraan yoolalka ay higsanayaan xirfadaha. Imaaraadka Carabta Emirates, Waxay ahayd adduun ka duwan kuwii safarka quruxda badnaa ee adduunka. Guud ahaan hadalka, yaa ka dambeeya booqashada meeshan qalaad unind maskaxdooda jirka iyo naftooda. Waxay ii aheyd wax cajiib ah sannadihii 15 aniga ahaan inaan ka mid noqdo dunidan. Maalin kasta iyo maalin walba waa mucjiso dhul gariirkaan. Waqti kasta oo Dubai ay soo bandhigto wax qurux badan taas oo abuuraa daqiiqado hufan martida iyo dalxiiska.
Markhaatikeyga shakhsi ahaaneed ee Dubai. Waxaan u imid sidii qariib dalkan imikana waxaan dareemayaa inaan ahay qayb ka mid ah. Waxay i siisay qoyskeyga iyo xasuus aan jeclaa oo aan ku xuso oo aan ku helo gacmo iyo taageero aan xad lahayn. Waxay ii noqotay iftiin siyaabo badan waxayna i siisay rajo maalmaheyda murugsan. Hogaamiyaha dalkani waa shaqsi u riyaaqsan Xoog-jecel, u heellan, edeb leh haddana is-hoosaysiin iyo daryeel leh. Waa hanuunintiisa iyo aragtidiisa ka dhigayay Dubai inay noqoto dhul loo yaqaan 'Wonderland'. Waa nin ku dayasho mudan, qof, Aniga ayaa eega.
Soo dhawayn, diirimaad iyo umad kasta oo siiya muuqaal dahsoon waayo-aragnimada waa ballanqaadka Dubai. Intaa waxaa sii dheer, booqdeyaasha halkan ku soo booqda ee leh su'aalo iyo wareer ayaa la hubaa inay ku soo laaban doonaan iyaga oo dhoola cadaynaya wejigooda. Aan ku dareensiino inaad dareento Dubai oo aan ku bilaabo.
Burj Al Carab
Exterio-ka cad ee iftiinka leh ee Burj Al Arab wuxuu qaabeeyaa habeenkii. Maaddaama saadaasha iyo muuqaallada iftiinka lagu soo bandhigo qaab dhismeedkooda qoob ka ciyaarka. Amaah: Burj Al Arab.
Burj Al Arab-Hotel Iconic oo ku yaal jidka Jumeirah ee ka gudbaya Gacanka Carbeed. Imaaraadku waa meel lagu dego iyo naftaada ka faaruq walwalka iyo walwalka. Sidoo kale adduunka raaxada iyo hudheelka hudheelka ayaa kaa dhigaya inaad jacayl ku qabtid adeegga shaqsiyadeed iyo jawiga ay martida u fidiso. Jumeirah Madinat Jumeirah- Hadaad jeceshahay inaad dareento inaad tahay Amiir ama amiirad ma jiri doontid meel kale ama waxaa lagayaabaa inaan kula hadlo kaniisad ahaan.
Royalty iyo hudheelka ayaa ah sida martida martida ah ee booqata meeshan waa hubaal inay dareemi doonaan boqornimada. Haddii ay tahay inaan qoro dhamaan hotelada raaxada oo aan kahadlo waxay noqon laheyd mid aad u badan laakiin haa waxaan magacaabi doonaa dhowr kuwaas oo aniga iyo martigeyga kaheley inaan dareensanaano kala duwanaansho sidoo kale la siiyaa dareen dhammaystiran wakhti kasta Waan booqday iyaga Jumeirah Zabeel Saray, Atlantis the Palm, Fairmont Dubai, Armani ku yaal Burj Khalifa iwm.
Soo-booqdeyaasha leh ubax dhadhan fiican leh ayaa ku raaxeysan kara dhammaan cuntooyinka kala duwan ee Cunnada Kalluunka, Cunnooyinka carabi ah, Cunnooyinka Talyaaniiga ah, The Indian Wada sheekaysiga cuntada, hiwaayadda cajiibka ah iyo macmacaanka tijaabada ah ayaa la adeegay maqaaxiyo kaladuwan oo ku xeeran Dubai. Martidu wax bay cuni kartaa si ay u buuxiso oo waxay ku qurxisaa cuntada quruxda badan si ay u daboosho calooshooda uraynta.
Dubay, Imaaraadku Waa Mid Weyn!
Aniga shaqsi ahaan waxaan hayaa maqaayado badan oo aan jeclahay laakiin in la xuso wax yar oo dareen xusuus leh qalbigayga ku jira ayaa ah Pierchic oo ku taal Pier iyada oo la iska indhatirayo badda qurxoon ee kaa dhigaysa inaad ku raaxaysato cuntadaada halka dabaysha qabow ahi ay timahaaga xirto, Amla Restaurant oo ku yaal Jumeirah Zabeel Saray waxay siisaa dareen dhab ah dhaqanka iyo dhadhanka Hindida, Al Mahara Seafood Restaurant - Waxay ku yaalliin Burj Al Arab waad ku raaxeysan kartaa raaxada adigoo daawanaya quruxda xayawaannada badda.
Waxaa jira meelo badan oo qurux badan oo wali la baari karo laakiin maqaayad kastaa waxay leedahay saxan saxeexo u gaar ah, jawiga, isku xigxiga adeegyada iyo bilicda ay jecel yihiin taas oo martida siineysa Khibrad WOW waxayna ku dartay safkooda xusuusta.
Dubai Spa iyo xarumaha fayo qabka
Kuwa rumeeyey nolosha caafimaad iyo jacaylka si ay u buuxiyaan jiritaankooda gudaha si fudud ayey ugu baxsadaan meelo kala duwan oo loo yaqaan 'Spa'. Intaa waxaa dheer, ladnaanta xarumaha ku yaal Dubai magacaabi doonaa dhowr The Moksha Spa, Talise Spa, iyo sidoo kale, Armani Spa iwm Iyada oo xulashooyinka daweynta gaarka ah la heli karo waxaa la siiyaa martida iyadoo loo eegayo niyadooda. Daaweyntoodii ka dib runtii martidu waxay dareemaysaa farxad, naftoodu waxbay isu dhiibtaa dareenka nabdoon ee gudaha.
Mudanayaal iyo gabdho la sumeeyay waligood kuma farxi doonaan maadama ay heli karaan waxkastoo ay jecel yihiin meeraha halkan ku yaal Dubai. Tusaale ahaan, dharka sumadda leh, waxyaabaha xiisaha leh, qurxinta guryaha, cunnooyinka caafimaadka qaba, cuntooyinka ay ka helaan qurxinta Jannooyinka. Gacaliye hubso inaad la qabsato aalado kala duwan oo elektiroonig ah oo laga heli karo suuqyada xiisaha leh iyo Car qolal bandhigyo leh isboorti ugu fiican baabuur sida xaqiiqada ah iyaga kaxayn doonaa waalan.
Waxyaabaha lagu sameeyo Dubai ee carruurta
Kids & Martida jecel jaceylka, raaxada iyo aragtida Dubai waxay leedahay soo jiidasho badan oo ay booqato iyo in lagu khiyaameeyo meelaha sida Dubai theme park, Desert Safari, Dubai Creek, Matxafka Dubai iyo Masaajidka Jumeirah, The Glow Garden iyo waxyaabo kaloo badan oo la aado.
Caruurta halkan timid way hubsan yihiin inay leeyihiin dareen ah ee Alice ee yaabka waana laga argagixin doonaa khaa'inka badan Waxaa laga heli karaa dhowr meelood sida magaalada xiisaha leh, Kalluunka loo yaqaan 'Dolphin Aquarium, Kidzenia, Plan Magic', Legoland, IMG World, Biyo-maalmeedka Aqua, Beeraha Wabiga Water Wadi waa hubaal inay mashquul ku yihiin oo ay la yaabeen Maaddaama ay booqdeen meelaha kaladuwan waxay ku dareensiin lahaayeen inay weligood sii joogaan.
Dubai waxaa loogu talagalay dhammaan kuwa u yimid in ay raadsadaan fursado shaqo!
Dubai sidoo kale waxay ahayd xaruntii ganacsiga ee ugu xiisaha badnaa dhulka iyo tababarka, hagaha iyo hagaha dhammaan kuwa u yimid in ay raadsadaan fursado shaqo. Waxaa jira sheekooyin badan oo rags ah oo taajirnimo ah, eber u ah geesiga yaa waxay heleen guushooda oo ay ku gaadheen riyadoodii yool dalkan.
Jaranjaradii wuu fidiyay loogu talo galay soogalootiga cusub iyo kuwa la loolamaya dad badan ayay xidid ku sameeyeen oo ay sii xoogeysteen aqoontooda oo ay uxilsaaraan sidii xiddigo.
Ugu dambeyntiina ugu yaraan dhammaan waxaan haysto in la yiraahdo waa Dubai waa goob sixir ah oo leh quruxdeeda, dhaqankeeda iyo waaya-aragnimadeeda wixii ka baxsan jacaylka. Dubai way kobcaysaa waxayna ku sii wadaa koritaanka dhinac kasta sidaa darteed Guest kasta oo soo noqnoqda marka uu mar labaad booqdo waxay leedahay wax kala duwan oo waayo-aragnimo ah. Dubai waa goob lagu abuuro xasuus aan la ilaawi karin daqiiqad kasta oo lagu isticmaalo halkan. Jacaylka Dubai & Dareenka Dubai. Aan ku soo gabagabeeyo gabay.
Anigoo ah Dubia aan jeclahay, Poem
Waxaa jira meel dunida ka mid ah
Taas oo loo yaqaan "Dubai" Dunida riyada
Niyad jajabinta, xiiso leh, ka baxsan fikradda
Waxaan ku qeyliyaa inaad tahay adduunka ugu fiican
Halkan, carruurta, Qoyska, Lamaanaha iyo Odayaasha
Qof kastaa wuxuu la kulmi karaa isbitaal iyo daryeel
Dubai marwalba waxay ku dadaaleysaa inay riyooyin iyo malaynba noolaadaan.
Waa fudud, sharaf iyo Grand
Quruxda iyo ducada ayaa weligoodba dabooli doona dhulkan.
Shirkadda Dubai City, guud ahaan hadlidda, hadda siinaya fursado shaqo oo wanaagsan. Intaa waxaa dheer, waxaan bixinaa hagayaal waayo, Xirfad shaqo oo ku taal Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Marka, adiga oo tan maskaxda ku heysa, waxaad hadda heli kartaa tilmaamo, talooyin iyo shaqaalaynta Imaaraadka Carabta oo leh luqaddaada.